राजधानीका अधिकांश पेट्रोल पम्प एम्बुस जस्ता | Sagarmatha TV
मापदण्ड विपरितका पम्पलाई राज्यकै संरक्षण
काठमाडौं । सबैलाई थाहा छ, अहिले काठमाडौं उपत्यकामा घना बस्ती बीच बग्रेल्ती पेट्रोलपम्प रहेका छन्। तर, पेट्रोलपम्पको संवेदनशिलता प्रति भने कसैलाई चासो देखिएको छैन।
अनुमान गरौं त, घना बस्तीबीचका पेट्रोलपम्प मै आगो लाग्यो भने हालत के होला ?
पेट्रोलपम्पमा आगो सल्किइहाल्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता कसैसँग छैन। सानातिना आगो निभाउनै अपुग उपत्यकामा रहेका थोत्रा दमकलहरूले पेट्रोलपम्प लागेको आगो निभाउने क्षमता राख्दैनन्।
सामान्य घरमा लागेको आगो निभाउनै आच्छु-आच्छु पर्ने जुद्ध वारुणयन्त्रसँग पेट्रोलको आगो निभाउने भरपर्दो साधन नै छैन। यसतर्फ न त सरकारले नै सोचेको छ, न त पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरुले नै। अहिलेसम्म पेट्रोलपम्का विषयमा अनुगमन समेत नगरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोल स्वीका गर्छन्।
अझ कतिपय पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरूले त आफैंले न्यूनतम सुरक्षा पनि अपनाएको पाइँदैन धेरै पेट्रोलपम्पहरूमा साधारण आगो निभाउने स्प्रे, बालुवा र पर्याप्त पानीसमेत राखिएको छैन, भएका ठाउँमा पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्।
केही पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरु भने सामान्य आगो निभाउने यन्त्रको व्यवस्था गरेको बताउँछन्।
मापदण्ड विपरित पेट्रोल पम्प सञ्चालन
पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली २०७५ अनुसार नगरपालिका भित्र पम्प संचालन गर्न कम्तिमा २ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा आवश्यक पर्छ। पेट्रोलपम्प मानव बस्तिबाट कम्तिमा ५०० फिट पर हुनुपर्छ भने एउटा पम्प र अर्को पम्प विचको दुरी ३०० मिटर भन्दा बढी हुनुपर्छ।
तर, काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर-सुनधारा, टेकु लगायत क्षेत्रमा २०-२५ मिटरको दुरीमा पम्प सञ्चालन भइरहेका छन्।
प्रज्वलनशिल पदार्थ विक्रि हुने यस्ता पम्पको दुरी ३ सय मिटर हुनुपर्ने नियम रहे सरकारको अनुमतिमा मात्र खोल्न पाएने प्रेट्रोलपम्पमा यो नियम लागू भएको देखिदैन। जसले बिद्यमान ऐनको धज्जी मात्र उडाएको छैन, पाईला-पाईला जोखीम् निम्त्याई रहेको छ।
अर्कातिर विनियमावली २०७५ अनुसार, पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेताको लागि उपत्यकाभित्र पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा ७ सय ५० वर्ग मिटर अर्थात ८ आना जग्गा हुनुपर्छ। तर, उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांक पेट्रोल पम्प यो मापदण्डमा चलेका छैनन्।
नेपाल आयल निगमका निर्देशक विरेन्द्र गोइत २०६५ पहिले सञ्चालनमा आएका पम्पका विषयमा कुनै जानकारी नरहेको भन्लै पन्सन्छन्। उनका अनुसार ६५ यता संचालनमा आएका पम्पहरुबारे आयल निमग जानकार रहेको भन्दै ती सबै नियमसंगत नै संचालनमारहेको छन् ।
निगमका अनुसार अहिले देशभर झण्डै २३ सय पेट्रोल डिजनका पम्प सञ्चालनमा छन् भने थानकोट डिपोबाट तेल वितरण हुने काठमाडौं, लिलतपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्लामा मात्र १ सय ८८ वटा तेल वितरण गर्ने पम्प छन्।
सानो लापरबाहिले ठुलो दुर्घटना निम्त्याउने हु्ँदा आम सर्वसाधारण त्रासमा बस्न बाध्य छन्। नागरिक सुरक्षाा राज्यको दाियत्व हो भने नागरिकलाई असहज हुनेगरी पम्प संचालन नगर्नु व्यवसायीको कर्तव्य हो।
पेट्रोलपम्प जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट कडाका साथ कानुनको पालना नगराउनु लापर्वाहीको पराकाष्टा हो। यदि समयमै यसको सम्बेदनशीलता नबुझ्ने हो भने जुनकुनै बेला भयानक दुर्घटना निम्तने पक्का छ।
अत्याबस्यकीय पेट्रोलियम पदार्थको विक्रि वितरण गर्ने पेट्रोल पम्प सानो कमजोरी हुना साथ शक्तिशाली बम बन्न सक्छन्। पेट्रोलपम्पले शक्तिशाली बमले जति नै क्षति निम्त्याउन सक्छ।
एमसीसीबारे संसदमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी नेता देउवाको एउटै स्वर
कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा नेविसंघका दुई समुहबीच झडप
पूर्णिमायालाई पक्राउ गरेर सभामुखको सपथ !
सभामुखको सपथपछि अग्निप्रसादले भने ‘अव म पूर्णरुपमा साझा भएँ’
चीनमा कोरोना आतंक : भाइरसको संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या ८० पुग्यो
भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाललाई ३० एम्बुलेन्स सहयोग
अलौकिक वस्तुको प्रलोभन देखाएर लुटपाट गर्ने ६ जना पक्राउ
अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित
द्वन्द्वकालीन मुद्दाका घटना टुङ्ग्याउन नेकपा अध्यक्षद्वयबीच छलफल
सभामुख चयनका लागि आज निर्वाचन हुंदै, अग्नि सापकोटाको एकल उम्मेदवारी
कोरोना भाइरसको त्रास : रुघाखोकी लाग्ने बित्तिकै अस्पताल जान सुझाव
एमसीसी सोझै सदनमा टेबुल गर्ने ओली-प्रचण्डको समझदारी
सभामुखको कुर्सी नजिक पुगेका अग्नि सापकोटालाई आएको संकट
नेपाल एयरलाइन्सका २० पाइलटले बुझाए राजीनामाको सूचना
प्रदेश १ लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले खाए सपथ, अव काम सुरु
माफि माग्न जाँदा पक्राउ परेकी गायीका आस्था राउतलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न प्रशासनको आदेश
बास्केटबल खेलाडी कोबे ब्रायन्टको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यू
गायिका आस्था राउत पक्राउ
भारतीय बीमा कम्पनी डुब्दै, असर नेपालमा पनि पर्ने खतरा